इन्स्योरेन्स शिक्षा: कृषि क्षेत्रभित्रको तरकारी खेती बीमा गर्दा के फाइदा त ? – Insurance Khabar
इन्स्योरेन्स शिक्षा: कृषि क्षेत्रभित्रको तरकारी खेती बीमा गर्दा के फाइदा त ?
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७५, शुक्रबार १७:१७
इन्स्योरेन्स शिक्षा: तरकारी खेती एक नगदे बाली पनि हो । कृषहरुको आम्दानीको स्रोत पनी हो । तर कृषि पेसालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चैँ कमै व्यक्तिको मात्र जिज्ञासा रहन्न सक्दछ । कृषि पेसालाई पनि किन उच्चस्तरीय कार्यको रूपमा नराख्ने त ? कसरी आफूले गरेको काममा भई परी आउने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि खोज्नु जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि व्यवसाय वा कुनै पनि काम आरम्भ गदा भावी दिनमा आउने जोखिमलाई पनि मध्यनजर गनिपर्दछ ।
बिशेष गरी तरकारी खेतीको बिमा गर्दा बीमकले बीमाको अवधि भित्र तरकारी खेतीको विवरण तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमका तरकारी खेतीको क्षती÷ हानी नोक्सानी भएमा लागत मूल्य अनुसारको क्षतीपूर्ती रकम सम्बन्धित पक्षलाई दिने गर्दछ । यदि कुनै पनि कारणबस तरकारी खेतीको बिमा अवधिभरी हानी नोक्सानी भएमा लागत मूल्यको अनुसारको क्षतीपूर्ति रकम भुक्तानी गर्न गर्दछ । बीमकले उक्त अनुसूचीमा उल्लिखित बीमाङक रकमको ९० प्रतिशत रकम बीमितलाई भुक्तानी गर्नछ ।
४)आधिँबेहरी, असिना, हिँउ वा तुसारो
५)आकस्मित, दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु
६)किरा आदिबाट हुने नोक्सानी
प्रस्तुती : रिना खत्री
[‘इन्स्योरेन्स शिक्षा’ कार्यक्रम नेपाली बीमा क्षेत्रको बिकाशको लागि थालीएको एउटा नविनतम प्रयाश हो, येदि तपाईहरु संग पनि इन्स्योरेन्स सम्बन्धिका कुनै समाचार, लेख/रचना, बिस्लेषणहरु छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ [email protected]]